३ वर्षदेखि बाटोमै बास, घरमा बस्ने कुनै आशै छैन ! - बिरगंज खबर
३ वर्षदेखि बाटोमै बास, घरमा बस्ने कुनै आशै छैन !
मुगु । सेतो, कालो फुलेको कपाल, हातमा घडि, ठड्डिएको लौरो, न्यानो ज्याकेट, पछाडि निगालोले बुनेको डोको, अन्य कट्टा, बाटोकोछेउमा बिछ्याईएको ओछ्यान । उनी हुन एक वृद्ध । जो मुगु कार्मारोगं गाउँपालिका वडा नं ९ छाईलका बलरुप बुढा ।
उनी उमेरले ६० नाघे । यतिका वर्ष पुग्दा केही वर्ष घरमै बास बित्यो । पछि उनको बास घरमा बस्ने कुरा त परै जाओस् ३ वर्षदेखि बाटोमै बास छ । उनी बाटोमै बास बस्नको कारण यो छ कि बुढाका आफन्त घर परिवारको सबैको केही बर्ष पहिला निधन भएको थियो । र, गाँउलेले सम्पति सबै आफै उब्जनि गरि खाँदै आएको उनले सुनाए ।
उनले भने, ‘घरको सम्पति त खान पाईएन । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवाबाट कहाँबाट पाउनु।’
उनले राज्यको सुविधा नपाउनुको कारण नागरिकताको प्रमाण पत्र अहिले सम्म नहुनु हो । आफन्त घर परिवार, छर छिमेकीलाई नागरिकता पाउन दिलाउन पहलका लागि अनुरोध पनि गरे । तर कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
राज्यले पनि नागरिकता दिन पहल गरे पनि कुनै पनि सुनुवाई र चासो नदिइएको उनले बताए । उनी भन्छन्र्, ‘अहिले म सँग कोही पनि छैन । म एक्लै छु । एक गेडो अन्न पनि खान पाउने अवस्था छैन । दाजु भाईले खानको लागि हात खोलीदिए पछि एक गाँस खान्छु । कसैले हातको मुठि बन्द गरे कहिले भोकै बस्ने र कहिले आफ्नै दिसा पिसाव खान पनि बाध्य भएको छु।’
उनी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म हिड्न डुल्न पनि सक्दैनन् । उनको शरीरको तल्लो भाग पूरै चल्दैन । ओछ्यानमै बास, दिसा पिसाव पनि त्यही गर्ने गरेको उनले बताए ।
जुम्लाबाट मुगुको छाईल बजारमा व्यपार व्यवसाय गर्दे आइरहेका कन्या भण्डारीले झक्कल खाना दिने गरेको बताए । धेरै जसो आफु कामको व्यस्त हुन्छ, कहीले काही भोकाए पछि कराएको आवाज सुनेपछि भात र अन्य खाने कुरा गरेको सुनाए । उनको पीडा निकै गाह्रो भएको भण्डारी बताउछिन् ।
‘उनले सँधैभरी यहाँ बस्न पाउँदैनौँ उतिखेर कसैले पनि खाना दिदैनन् भोकै बस्छन् । उतिखेर उनको आँखा बाट आँसु नझरेको दिननै हुँदैन।’ उनले भने, ‘यी वृद्धलाई उद्धारको लागि माग गरेँ ।’
सहयोगको लागि हात जोड्दै
पीडित वृद्ध बुढालाई उद्धारका लागि यहाँका स्थानीय सरकार, सँगै तीनै तहका सरकार लाई माग गरेका छन् । ३ वर्ष बाटोमै दिन बिताईयो अब कसैले दया मानेर उद्धार गरि दिए भए मेरो जीवनमा परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘मेरो उमेर पनि ढल्किसक्यो अब कति पो बाँच्ने, बाँचुन्जेलसम्म केही उद्धार गरिदिए भने राहत पुग्ने उनको विश्वास छ।’
१० हजार ७८ को पीसीआर/एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ हजार १२२ जनामा कोरोना पुष्टि